Arụrụ n'ụlọ CO2 maka Aquariums | Azu
Arụrụ n'ụlọ CO2 maka akwarium
Viviana Saldarriaga | | Mmiri aquarium, Aquarium mmiri
El CO2 n'ime akwariumỌ dị ezigbo mkpa, ọ bụghị naanị maka anụmanụ anyị, kamakwa maka osisi anyị nwere n'ime ọdọ mmiri. Ọ bụ maka nke a na taa anyị chọrọ igosi gị ụzọ ọhụrụ esi emepụta CO2, n'ụzọ dị oke mma na ogologo oge. Iji mee ụlọ CO2 a na-eme n'ụlọ maka aquariums ị ga-achọ ihe ndị a: 1 karama nke otu lita na ọkara nke soda, 1 onye na-ekesa mmiri nke na-eweta mpempe afụ na valvụ na-enweghị nloghachi, iko shuga, envelopu nke bicarbonate, a tablespoon nke yist tii na iko na ọkara nke mmiri ọkụ.
Ihe mbụ ị ga -eme bụ ịkwadebe onye na -eri nri, maka sistemụ, na -eme obere oghere na mkpuchi ma na -etinye eriri mmiri, mgbe ahụ ị ga -eji obere silicone mechie ya n'akụkụ abụọ, iji zere ụdị mgbapụta ọ bụla. N'ime nnukwu efere ị ga -etinye iko na ọkara mmiri ọkụ na iko shuga, na -agbalị igbari nke ikpeazụ n'ụzọ kacha mma. Jel ga-etolite na ị ga-agwakọta ya bicarbonate.
N'otu oge a edo inggwakọta, tinye ya na karama ahụ ma tinye ya na friji ruo ọtụtụ awa, ruo mgbe ọ ga-esi ike. Ekwadoro m ka ị tinye ya na friji n'akụkụ ya ka jelii ahụ dị na mkpọda ma kpuchie ọtụtụ karama ahụ.
Mgbe jelii dị njikere, n'echi ya, were mmiri ọkụ jupụta karama ahụ, na -ahapụ ihe dị ka sentimita asaa ka ọ tọgbọ chakoo, ka enwere ohere ịgba ụka. Ozugbo emesịrị, tinye otu ngaji yist n'ime karama ahụ, na -ezere ịkpali ma ọ bụ ịma jijiji. Tinye ntakịrị mmiri na mmiri ọgwụ ma ozugbo ọ dị njikere, tinye okpu na karama ahụ, na -anwa imechi ya nke ọma dịka o kwere mee wee jikọta eriri ahụ na njedebe nke onye na -enye ọbara. akwarium esịtidem nyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Mmiri aquarium » Arụrụ n'ụlọ CO2 maka akwarium
Lemọn Labidochromis Azụ